नेपालीद्वारा सञ्चालित अष्ट्रेलियाको कलेज बन्द, नक्कली बिद्यार्थी खडा गरी लाखौं डलर दुरुपयोग गरेको पुष्टी !
ARCHIVE, COVER STORY, INVESTIGATION » नेपालीद्वारा सञ्चालित अष्ट्रेलियाको कलेज बन्द, नक्कली बिद्यार्थी खडा गरी लाखौं डलर दुरुपयोग गरेको पुष्टी !
काठमाण्डौ - अष्ट्रेलियामा नेपाली मूलका ब्यबसायीद्वारा सञ्चालित रोयल गुर्खा इन्सटिच्यूट अफ टेक्नोलोजी कलेज बन्द हुने भएको छ । सरकारले प्राबिधिक शिक्षा पढाएबापत कलेजहरुलाई दिने रकमको दुरुपयोग गरेको ठहर भएपछि उक्त कलेज बन्द हुने भएको हो ।
कलेज बन्द भएसँगै त्यहाँ कार्यरत करिव २ सय कर्मचारी बेरोजगार हुनेछन् भने करिव १४ सय बिदेशी बिद्यार्थीको भविष्य पनि अन्यौलमा परेको छ । तर, कलेजले भने बिज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो निर्णयमाथि पुनराबेदन गर्ने र अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कलेज सञ्चालन गरिरहने बताएको छ ।